Ciddii ka hortimaadda arrimaha dowladda Jordie Zwarts wey cilladaysan tahay tan, laakiin ma guuleysato: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 14 May 2020	• 5 Comments
Waxaad ku nuugi kartaa guluf maaliyadeed, sida uu ku xayaysiiyay Robert Jensen wareysigii ugu dambeeyay, laakiin maxaa ku dhacaya lacagtaada? Aniga qudhaydu aniga ayaa ila soo xiriiray oo bilaabay taageerada Bond ee ka dhanka ah Arimaha Dowlada, Jordy Zwarts (fiiri sawirka), laakiin ficil kan la mid ah oo ka dhan ah 5G ma illaa iyo hada waxba kama uusan gaarin. Wuxuu sameeyay, si kastaba ha noqotee, wuxuu aruuriyay tobanaan kun oo yuuro (ilo badan) oo la mid ah ayaa laga filan karaa dacwadaha ka dhanka ah xirida iyo hal mitir iyo badh mitir gobolka.
"Waa maxay sababta taasi waa cod-bixin dhaqaale oo aad horayba ugu dhahday inaysan waxba noqon doonin Vrijland? Hada xoog ku soo biiro! Café Weltschmertz wuu taageeraa, Jensen wuu taageeraa!Sababta oo ah garsoorayaasha iyo qareenadu waxay ku dhaartaan u hoggaansanaanta carshiga (guriga boqortooyada) weligoodna ma wiiqi doonaan wixii ay ku dhaarteen dhaarta.
"Haa, laakiin tillaabooyinka coronavirus-ku waa sharci-darro! Runtii waxbaa ku guuleysan kara!Waxa kaliya ee Jordy Zwarts ku guuleysan doono waa in akoonkiisa bangigu kor u kaco iyo in Robert Jensen (jensbaba33") Faa'iidooyinka isaga oo kor u qaadaya. Tan kale, waad sugeysaa oo waxba ma yeeshid.
Dabcan waad runtii ogaan kartaa naftaada, laakiin waan kuu digay. Waxaan u maleynayaa inaan runtii u baahan nahay inaan toosno waxa socda.
Iyada oo loo marayo Robert Jensen iyo Jordy Zwarts (Arimaha Dowlada Federaalka) waad sii wadaysaa dadaalka dadka kale. Waxaad dhigaysaa € 29 ka dibna waxaad rajeyneysaa in qareen uu fayl galiyo dacwad, oo laga yaabo in aan lagu guuleysan ama aan lagu guuleysan. Xaqiiqdii ma rabtaa inaad caajiso oo aad rumeysatid inuu xaakin xukumi doono gobolka? Dabcan maya. Dhammaantood way dhaarteen inay daacad u yihiin taajka.
Waqti uma lihin inaan khasaarinno. Waa 1 daqiiqo ka hor 12. Dowladda maanta waxay muujisay inay bulshada oo dhan u rogi karto isbuucyo gudahood. Wixii hore loo oran karo waa wax aan macquul ahayn iyo wax aan la aqbali karin ayaa lagu riixay waqti aad u yar. Dhaqaalaha oo dhan iyo habka wada noolaanshaha ayaa loo rogay. Taasi micnaheedu waa in isbeddel deg deg ah ay muuqato suurtogal. Marka isbeddelku si dhakhso leh ayuu u socon karaa.
Maaha in laga filo isbadalka ka imanaya dawlada ama laga filaayo isbadalka ku yimid Bond ka dhanka ah Arimaha Dowlada. Waa inaan annagu is qabanno! Waa inaannaan u jeedin jaahwareerkaaga sugitaanka urur shaqaale, waa inaan u rogno niyad jabkeena xoog iyo ficil la taaban karo. Is-dhaqdhaqaaqa, adigu samee. akhri halkan ku sii ...
Robert Jensen (jensen.nl) iyo 'joojinta xannibaadda', oo, sida uu sheegayo Martin Vrijland, ay tahay shabakad amni
Tags: Adkeyn, qareenada, doodda, mid iyo badh, bond, kafeega, de, featured, dastuur, Jensen, jensen.nl, jordy, xirid, meter, arrimaha dowladda, proces, Dowladda, joojin, ka hor, Weltschmertz, qoyan, madow
14 May 2020 ee 22: 54
Akhristayaasha cusub: Freemason had iyo jeer waxay kugu ogeysiinayaan inay ka tirsan yihiin kooxda. Lambarka 33 waa lambar Masonic muhiim ah.
Jensen ayaa sheegay in idaacadda Jensen uu socdo muddo 33 daqiiqo ah isla markaana uu Jensen naftiisa ugu yeerayo Jensbaba33.
Soo hel sawirka? Mucaaradka la xakameeyay.
14 May 2020 ee 22: 55
Baba waa nin weyn oo Afrikaan ah oo xoog badan kana soo jeeda mid ka mid ah waddamada Gacanka Guinea. Waxaa afduubay nin ganacsade ah oo addoomo ah, waxaana laga iibiyay adduunka cusub. Muddo dheer ayuu noloshiisa addoonsiga ku qaatay dhir Mareykan ah, ilaa laga xoreeyay burcadbadeedda Redbeard. Ilaa iyo markaas, wuxuu ka mid ahaa kalsoonidii laga qabay kabtanka afduubka ee laga cabsi qabo, isaga iyo Tripod iyo wiilka kale ee loo yaqaan 'Redbeard' Erik. Walaashiis Aïcha wuxuu addoon ku ahaa Algiers, kaas oo la diley kadib markii uu caawiyay Erik inuu ka cararo magaalada.
Waa mid aad u weyn, aad u xoog badan oo u dabbaalan sida xardho. Ma ku dhawaaqi karo "r", taas micnaheedu maahan inuusan ahayn qof caqli badan, maxaa yeelay wuxuu had iyo goor leeyahay fikrado wanaagsan iyo aragti xeeladaysan. Taasi waa sababta Roodbaard iyo Erik ay si joogto ah uga baxaan ururka abaabul dhul ah Baba.
15 May 2020 ee 07: 00
Haa, fara badan b (l) ab (l) a…
14 May 2020 ee 23: 51
Sababta uu Jensen hadda u wada jeedinayo indhaha oo dhan dulsaarka ka dhanka ah arrimaha dawladda (oo ay u badan tahay inuu mar kale samayn doono berri) ayaa ah sababta oo ah inaadan ka qaybqaadan karin dadaal bulsheed oo xor ah. Waa inaad kujirtaa shabaqa badbaadada kontaroolada oo dhan, haku dabaalan dabaasha oo ha bilaabin naftaada.
Waqti la sameeyo taas si kastaba: https://www.fvvd.nl/
26 May 2020 ee 09: 49
« Miyaad qaadan kartaa ama diidi kartaa tallaalka Covid-19 haddii ay qasab noqoto? Maxaa la sameeyaa?
Dimuqraadiyadda toos uga toosi xirida iyo soo kabashada dhaqaalaha »
Wadarta booqashooyinka: 2.487.243